सुस्मिताको कीर्तिमान ! - Nepal's Digital News Paper
सुस्मिताको कीर्तिमान !
काठमाडौं । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत सुटिङतर्फ महिला १० मिटर एयर राइफलमा प्रदेश ३ की सुस्मिता नेपालले मंगलबार नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छन् ।
स्नेहाले २४० पूर्णाङकमा २३४ अंक जोड्दै स्नेहा राज्यलक्ष्मी राणाले राखेप च्याम्पियनसिपमा बनाएको २३३ अंकलाई भंग गर्दै कीर्तिमानी स्वर्ण जितिन् । २२७ अंकमा आर्मीकी कल्पना परियार दोश्रो तथा २०३ अंकमा प्रहरीकी अस्मिता राई तेश्रो भइन् ।
नेपालगन्ज रंगशालास्थित सुटिङ रेन्जमा भएको प्रतियोगिताअन्तर्गत सोही स्पर्धाको पुरुषमा प्रदेश ५ का अर्नव घिमिरे पहिलो भए । उनले कुल २४० अंकमा २१६ अंक जोडे । २१४ अंक जोडेका प्रहरीका हरिबहादुर थापा दोश्रो तथा १९६ अंक जोडेका आर्मीका सुशे चौधरी तेश्रो भए ।
प्रतियोगितामा बिजेता खेलाडीहरुलाई प्रमुख अतिथी संघिय ईकाई प्रहरी कार्यालय भैरहवाका प्रमुख तथा बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक राजेश लाल कर्ण, नेपाल तेक्वान्दो संघका केन्द्रिय सचिब नबिन कुमार श्रेष्ठ, केन्द्रिय सदस्य हिरा थापा, डब्लुटिएफका नेपाल प्रतिनिधी कोंगयोंग दाल, नेपालका मुख्य प्रशिक्षक नन्दु कुमार राई, सिद्धार्थ यातायात ब्यबसायी संघका अध्यक्ष सञ्जिब रोक्का, एसओएस बालग्राम लुम्बिनीका योजना निर्देशक बिजय राणा, नेपाल सुटिंग संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष ज्योत्सना राणा, भैरहवा ब्याडमिन्ट क्लबका कोषाध्यक्ष गणेश बहादुर क्षेत्री, रुपन्देही जिल्ला खेलकुद बिकाश समितीका कार्यालय प्रमुख संगमसिंह थापा, पुर्ब तेक्वान्दो खेलाडी तथा ओलम्पियन संगिना बैद्य, प्रदेश ५का तेक्वान्दो संयोजक कोशिष खडका लगायतले पदक, ट्रफी, प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।
बिजेता तथा उप बिजेता टिम र उत्कृष्टहरुलाई नेपाल तेक्वान्दो संघ प्रदेश ५ का संयोजक कोशिष खडका, उपाध्यक्ष द्धय प्रकाश मान राजभण्डारी र पराग दास गोर्खाली र रुपन्देहि जिल्ला तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष दिपेन्द्र बुढाप्रितीले ट्रफी र पुरस्कार सौजन्य गरेका थिए । प्रतियोगितामा पुम्से र स्पाईरिंग बिधामा गरी २ सय ४२ खेलाडी सहभागी थिए ।
आठौंअन्तर्गत १४ औं राष्ट्रिय उसुमा आर्मीले सर्वाधिक १४ स्वर्ण जितेको छ । आर्मीले थप १ रजत र ३ कांस्य पनि जित्यो । एपीएफले ५ स्वर्ण, ८ रजत र ५ कांस्य हात पा¥यो । प्रहरीले २ स्वर्ण, १ रजत र ५ कांस्य प्राप्त ग¥यो । २२ स्वर्णका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा बाँकी १ स्वर्ण कर्णाली प्रदेशले हासिल ग¥यो ।
कराते : प्रहरी टिम च्याम्पियन
नेपाल प्रहरी क्लब आठौं राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत राष्ट्रिय कराँते प्रतियोगितामा च्याम्पियन बनेको छ ।
दाङ तुलसीपुर स्थीत कर्भडहलमा सञ्चालित प्रतियोगितामा प्रहरी सर्वाधिक ९ स्वर्ण र १ रजत पदक हात पार्दै टिम च्याम्पिएन बनेको हो ।
त्यस्तै ३ स्वर्ण, ३ रजत र ४ कास्य हात पारेको नपाल आर्मीले उपविजेतामा चित्त बुझायो । ३ नम्बर प्रदेश २ स्वर्ण १ रजत र १ कांस्य पदकका साथ तृतीय स्थान हासिल ग¥यो ।
करातेको अन्तिम दिन मंगलबार सम्पन्न पुरुष कुमुते ६० केजी तौलसमूहमा नेपाल पुलिस क्लबका राजिव पुडासैनीले स्वर्ण पदक हात पारे । त्यस्तै प्रदेश नं ४ का राजकुमार रसाइलीले रजत जित्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जगतसिंह घानुक र एपीएफका मोहन कार्कीले कांस्य पदक हात पारे ।
प्रतियोगितामा विभागिय टिम नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस, शसस्त्र प्रहरीको एपीएफ, सात प्रदेश र एन.आर.एन.को सहभागिता रहेको थियो ।